Izithakazelo Amanani | I-FXCC
Ikhaya / Ukuhweba / Ama-forex Amathuluzi / Izithakazelo Amanani
Izindleko ezisezingeni eliphansi emabhange angaphakathi zingaba nomthelela omkhulu ekusebenzeni kwethu kokuhweba. Kulesi sithebula sinikeze uhlu olunzulu lwazo zonke izibalo eziyisisekelo, eziphathelene nawo wonke amabhange asemhlabeni jikelele.
Uma ushintsho lwamanani kufanele lwakhishwe, isibonelo, noma yiliphi lamabhange amane amakhulu: i-ECB, i-Bank Of Japan, i-Fed ne-UK's Bank Of England, kanti ukulungiswa kungahle kube nomthelela omkhulu ekusebenzeni kokubili kwezimali.
Isibonelo: Asho ukuthi i-Fed yembula ukunyuka kwe-0.25% e-United States isilinganiso senzalo, ngakho-ke i-dollar izokwenyuka ngokuyinhloko nakakhulu yabangane bayo abancane. Abatshalizimali bazobuyela edoli njengoba bekwahlulelwa ukuletha izinga elingcono lokutshala izimali.
Ngokwemibandela elula, uma uthola kuphela inzalo ye-0.5% ku-akhawunti yokulondoloza, bese ufaka imali emareli, emotweni yokulondoloza idoli yase-USA ngezinga le-0.75%, kubonakala sengathi liyigugu futhi lingabonakala libe yi-investment more .
Kukhona nezinye izinto ezibhekene namazinga asebhange, ikakhulukazi, ithuba lokusebenzisa lokho okubizwa ngokuthi "ukuthwala amathuba okuhweba".
I-Acurrency ithwala ukuhweba yiluhlelo lapho umtshali-zimali athengisa khona imali ethile, ngenani lentengo ephansi futhi esebenzisa izimali zokuthenga imali ehlukile, okunikeza izinga eliphezulu lentela. Umhwebi usebenzisa leli sinyathelo uzama ukuthatha umehluko phakathi kwamazinga. Leli gap lingase lihlale likhulu, kuye ngokuthi izinga lokusetshenziswa lisetshenzisiwe. Sibona izibonelo ezilula zokuhweba ezisezingeni lethu emakethe ye-forex njalo; uma sicabanga ukuthi i-dollar izophakama ngokumelene ne-euro, khona-ke sizobe sifushane i-EUR / USD.
Kungakhathaliseki ukuthi ukuzuzwa kwesikhashana okutholakala njengebhange eliphakathi, kutholakala ukuthi ukulungiswa kwezinga lesithakazelo kusetshenziselwa ukuguqulwa kwesilinganiso senzuzo, isikhathi eside isikhathi eside, abatshala izimali abavame ukubhekwa ngokuthi "abadayisi bezingubo" noma "abadayisi bezimpahla" bazwela kakhulu ngesilinganiso senzalo izinqumo ngamabhange aphakathi. Lolu hlobo lwabadayisi bezobuchwepheshe bangaphinde bahambise noma babambe izikhundla zabo zesikhathi eside ngezigaba ezihlukahlukene zemali, ngokuphathelene nokulungiswa kwesilinganiso senzalo. Bangase babeke amasheya ambalwa ngonyaka, futhi bahwebe kuphela uma ibhange eliphakathi lishintsha amazinga alo.
Thola Amanani Inzalo Ephakathi Kakhulu